ဘယ်လို WINDOWS 10 ကိုတစ်ဦး HARD DRIVE ကိုရောဂါရှာဖွေရေးဖျော်ဖြေဖို့ - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုတစ်ဦး hard disk ကိုရောဂါရှာဖွေရေးဖျော်ဖြေ
မိုဘိုင်းနည်းပညာန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ယနေ့မသက်ဆိုင်အသက်, သူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ productivity တိုးမြှင့်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်သောအရာတစ်ခုခုသင်ယူဖို့ကာလ၌မသာ, Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. ။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျအသုံးဝင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုမဆိုလယ်ပြင်၌ရှိသောသီအိုရီအသိပညာဆည်းပူးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု applications များအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google Play တွင်စာအုပ်များ
စာပေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကျယ်ပြန်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်: စိတ်ကူးယဉ်, nauchpop, ရုပ်ပြ, စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပို။ ဖတ်စာအုပ်များ, လက်စွဲ, ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ - - ပညာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုတစ်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးဤလျှောက်လွှာကို Self-ပညာရေးများအတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေထဲကတစ်ခုကိုမှန်ကန်စေသည်။ သငျသညျငယ်-လူသိများစာရေးဆရာများထံမှဂန္ထဝင်နှင့်ကလေးများရဲ့စာပေအဖြစ်သတင်း၏အကျင့်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအခမဲ့စာအုပ်များတစ်ဦးကစုစည်း။
မည်သည့် device ကိုအပေါ်အငြိမ့်ကိုဖတ်ပါ - နောက်ခံ, ဖော, အရောင်နှင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲအထူးအပြင်အဆင်များရှိပါသည်။ အထူးညဥ့် mode ကိုသင်၏မျက်စိ၏နှစ်သိမ့်များအတွက်နေ့၏အချိန်ပေါ် မူတည်. မျက်နှာပြင်တောက်ပပြောင်းလဲစေပါသည်။ တခြားအလားတူ application များ MyBook သို့မဟုတ် LiveLib ကြိုးစားနိုင်ပါ။
Google Play တွင်စာအုပ်များ Download
စီမံကိန်းနှင့်စသည်တို့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရူပဗေဒ၏နယ်ပယ်များတွင်ဆရာ, ဆရာမများ, ဓာတုဗေဒ, သင်္ချာ, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, ၏ပို့ချချက်ကောက်ယူသောမော်စကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-နည်းပညာအင်စတီကျု၏ကျောင်းသားများအတွက် ပို့ချချက်ဒေါင်းလုဒ်အချို့ကိစ္စများတွင်, စိတ္တဇအမြင် (အဖတ်စာအုပ်အတွက် themes များ) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူသီးခြားသင်တန်းများသို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။
ပို့ချချက်များအပြင်, ရုရှနှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကွန်ဖရ၏မှတ်တမ်းများရှိပါတယ်။ အကွာအဝေးပညာရေး၏ချစ်သူများအားဖြင့်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုခံရလတံ့သောသီအိုရီအသိပညာရဖို့တစ်ဦးကအကြီးအလမ်း။ အရာအားလုံးသာအကြောင်းအရာအလိုက်ကြော်ငြာ, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ကဒ်ပြားသုံးပြီးဝေါဟာရများနှင့်နိုင်ငံခြားစကားလုံးများကိုသင်ယူခြင်း၏ထိရောက်သောနည်းလမ်း။ အဲဒီမှာ Plei Market ကအများအပြား applications များလူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Memrise AnkiDroid သူတို့တွင်ဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်အကောင်းဆုံး Kvizlet ကျိန်းသေတဦးတည်း။ ဒါဟာလုံးဝနီးပါးမဆိုခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများပံ့ပိုးမှု, ရုပ်ပုံများနှင့်အသံ add, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်၏ကတ်များဝေမျှဖို့စွမ်းရည် - ဤလျှောက်လွှာများအများဆုံးအသုံးဝင်အင်္ဂါရပ်များအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ကဒ်များစုံ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်သည်။ ကြော်ငြာတွေမရှိဘဲပရီမီယံဗားရှင်း၏ကုန်ကျစရိတ် - သာ 199 ရူဘယ်တစ်နှစ်။ သည်အခြား tools တွေနဲ့နှင့် တွဲဖက်. ဒီ app ကိုသုံးပါနှင့်ရလဒ်ကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Quizlet ကို download လုပ်ပါ
ဒါကြောင့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာရေးများအတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် - ဒါကြောင့် YouTube ပေါ်မှာ, သင်သာဗီဒီယိုများ, သတင်းနှင့် trailers စောင့်ကြည့်နိုင်မထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ဒီနေရာတွင်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်: တစ်သင်္ချာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီ Varenkov စေခြင်းငှါ, အင်ဂျင်ကိုရေနံနေရာတွင်အစားထိုးဖို့ဘယ်လို။ features တွေနှင့်အတူဤ tool ကိုသငျသညျအပိုဆောင်းပညာရေးရရှိရန်များအတွက်အရေးပါသော tool ကိုဖြစ်လာရန်သေချာသည်။
ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ပင်အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုမှတသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ရေးနဲ့အဆင်သင့်လုပ်သင်တန်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာရရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက Youtube ကိုတဦးတည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ မဟုတ်လျှင်, သင်တန်း, ကြော်ငြာမှအာရုံစိုက်မရကြဘူး။
YouTube ကို download,
ဒါဟာသူတို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထပ်တိုးကူညီအသစ်သောအသိပညာရဖို့နဲ့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်စေမည်။ စပီကာကိုနှိပ်ကိစ္စများတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာ, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ရှိကြောင်းသက်ရောက်မှုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသည်ငါတို့ကိုန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးကိုပွုစုပြိုးထောနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၏စိတ်ကူးရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။
ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရုရှားစာတန်းထိုးနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်တင်ဆက်။ youtube ကနှင့်မတူဘဲကြော်ငြာအများကြီးလျော့နည်းခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားနည်းချက်မှတင်ပြချက်များအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များမျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စသည်တို့ကိုသင်္ချာအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစည်းကမ်းများကိုအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ, စာရင်းဇယား, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, လူသားနှင့်အတူပညာရေးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း သငျသညျ Stepic အပေါ်များသောအားဖြင့်သီအိုရီအသိပညာကိုလေ့လာပစ္စည်းများ၏ဝါးမြိုခြင်းကိုစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများနှင့်တာဝန်များကိုကမ်းလှမ်းရနိုင်ရှိရာပြီးသားဆွေးနွေးတင်ပြအရင်းအမြစ်များကိုမှမတူဘဲ။ Tasks ကိုစမတ်ဖုန်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းများဦးဆောင်သည့်အိုင်တီကဏ္ဍတွင်ကုမ္ပဏီများနှင့်တက္ကသိုလ်များကပြင်ဆင်နေကြသည်။
အားသာချက်များ: အပြက္ခဒိန်အတွက်အလုပ်များကိုအော့ဖ်လိုင်း function ကိုတင်သွင်းမှုအချိန်ကိုက်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်း, သတိပေးချက်များ setting, စီမံကိန်းရှိအခြားသင်တန်းသားများနှင့်အဆက်အသွယ်ကြော်ငြာ၏မရှိခြင်း။ အားနည်းချက်: အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသင်တန်းများကို။
Stepik ကို download လုပ်ပါ
အားလုံး applications များအခမဲ့ရရှိနိုင်ပေမယ့်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့သင်တန်းများအများစု။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး feature ကို: သင်ကုဒ်ရေးနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများ, ဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲ, ဦးဆောင်သူနှင့်အတူဝေမျှနိုင်မည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် sandbox '။
နောက်ထပ်ပညာရေးပလက်ဖောင်း, ဒါပေမယ့် SoloLern မတူဘဲပေးဆောင်။ အမျိုးမျိုးသောစည်းကမ်းများကိုအတွက်သင်တန်းများများ၏အထင်ကြီးဒေတာဘေ့စ: ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ဒေတာသိပ္ပံ, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများ, အနုပညာ, စီးပွားရေး။ ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများရုရှားနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်။ သင်တန်းများပေါင်းစပ်အထူးပြု။ သင်တန်း၏အောင်မြင်သောပြီးစီးအပေါ်သို့သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရနိုင်နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကထည့်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သော EdX, Khan Academy, Udacity, Udemy အဖြစ်ဤအလူကြိုက်များအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူမှု applications များအနက်။ သငျသညျအင်္ဂလိပ်လုံလုံလောက်လောက်တတ်ကျွမ်းလျှင်သင်အတိအကျရှိပါတယ်။
Coursera ကို download လုပ်ပါ
အဓိက Self-ပညာရေး - လှုံ့ဆျောမှု, ဒါကြောင့်အလေ့အကျင့်သို့ဝယ်ယူအသိပညာကိုသုံးပါနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေဖို့မမေ့မလြော့ပါ။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမှတ်မိကြလိမ့်မည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုခိုင်မာစေရန်။
ဗီဒီယို Watch: Meditate Like A Boss - meditation course week 1, with Pandit Bhikkhu, Bangkok (စက်တင်ဘာလ 2019).